घरमै बसीबसी कसरी गर्ने सेयर कारोबार ?
२४ पुस, काठमाडौं । यतिबेला सेयर बजारमा अनलाइन कारोबारको विषय चर्चामै छ । नेपालमा पहिलोपटक भित्रिएको पूर्ण अनलाइन स्वाचालित प्रणाली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने द्विविधा सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु माझ अझै पनि छ ।
जसका कारण वर्तमान अवस्थामा पनि सेयर खरिद वा बिक्री गर्नका लागि ब्रोकर कार्यालय गुहार्नै पर्ने बाध्यता छ । किन/बेचका लागि एकपटक अर्डर दिने र अर्को पटक चेक लिन वा दिन ब्रोकर कार्यालयमा पुग्नै पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन अझै सकेको छैन ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले भित्राएको अनलाइन कारोबार प्रणाली शुरुवात भएकै दिनदेखि समस्या देखिँदा लगानीकर्ताहरु अझ निरुसात्साहित बने । जसको कारण पनि अनलाइन कारोबार प्रणालीमा आकर्षण खासै देखिएको छैन । यसको प्रमुख कारण भनेको प्रक्रियागत झण्झट नै हो ।
घरमै बसीबसी सेयर किन्ने वा बेच्न सबैको चाहाना हुन्छ तर यसबारे ज्ञान नहुँदा धेरैलाई समस्या पर्ने गरेको छ । यदि तपाई पनि घरमै बसीबसी सेयर कारोबार गर्न चाहानु हुन्छ । तर, यसबारे जानकारी छैन भने हामी तपाईलाई बुझाउँछौं ।
नेपालमै पहिलो पटक सानिमा क्यापिटल तथा सानिमा बैंकको संयुक्तरुपमा एउटा नयाँ प्रोडक्ट लञ्च गरेको छ । जुन प्रोडक्टको नाम हो ‘थ्री इन वान खाता’ ।
सानिमा बैंकको यो एउटै प्रोडक्टबाट तपाईले बैंकिङ कारोबार र सेयर कारोबार दुवै गर्न पाउनु हुन्छ । यसवापत तपाईंले बैंकलाई कुनै अतिरिक्त शुल्कसमेत तिर्न नपर्ने बैंकका प्रमुख निक्षेप अधिकृत बबीसिंह गड्तौला बताउछन् ।
बैंकका प्रमुख निक्षेप अधिकृत गड्तौलाका अनुसार यस सेवा अन्तर्गत एकै पटक बचत खाता, लगानीखाता र डिम्याट खाता गरी ३ वटा खाता खोलिन्छ । यदि तपाईको यस अघि नै सानिमा बैंकमा बचत खाता छ भने सोहीखाता नै प्रयोग गर्न सकिन्छ । घर वा अफिसमै बसीबसी सेयर कारोबार गर्नका लागि बैंकको यो थ्री ईन–वान सेवा लिनै पर्ने हुन्छ, र यो सेवालिन सजिलो पनि छ ।
कसरी गर्ने त घर वा अफिसमै बसेर सेयर कारोबार ?
बैंकको थ्री इन वान सेवा लिइसकेपछि तपाईको इमलेमा यूजरनेम र पासवर्ड प्राप्त हुनेछ । त्यहीँ युजरनेम र पासवर्डको माध्यमबाट घर वा अफिसमै बसेर किनबेच गर्न सक्नु हुनेछ ।
यसका लागि बैंकको वेभसाइटको मुख्य पेजमा गई ई–बैंकिङमा लग इन गर्ने । यसभित्र थ्री इन–वान खातामा क्लिक गरी सेयर खरिद वा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ । त्यहाँ अप्सनहरु देखिनेछन् । कहीँ कतै नबुझिए बैंकमा सम्पर्क गरेर सोध्नसमेत सकिने बैंकले जनाएको छ ।
ग्राहकहरुको सुविधाका लागि बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा भएका सम्पुर्ण कम्पनीहरुको सेयरको अन्तिम मुल्य समेत यस पेजमा उल्लेख गरेको हुन्छ । हरेक दिन कारोबार राफसाफ प्रयोजनका लागि दिउँसो २.३० देखी ६.०० बजेसम्म सेयर कारोबार बन्द गरिने बैंकले जनाएको छ ।
थ्री ईन वान खाता सानिमा क्यापिटल र बैंकको सहकार्यमा सञ्चालित सेवा हो । साथ साथै यसका लागि सानिमा क्यापिटलले कारोबार राफसाफका लागि सेयर ब्रोकर कम्पनीहरुसँग थप सहकार्य गरेको छ ।
सेयर कारोबारको राफसाफ एकै कार्यदिनमा पुर्ण संचालित रुपमा हुने बैंकले जनाएको छ । सेयर खरिद वा बिक्रीको सफल कारोबार भए पश्चात् खरिदको हकमा पाँच कार्यदिनमा ग्राहकहरुको डिम्याट खातामा सेयर जम्मा गरिने बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै बिक्रीको हकमा पनि पाँचौ कार्य दिनमा बचत खातामा रकम जम्मा हुनेछ । बैंकका अनुसार यदि कारोबार सफल नभएको खण्डमा सम्पूर्ण रकम अर्डर गरेकै दिन ग्राहकहरुको बचत खातामा फिर्ता गरिनेछ ।
यसका लागि कानुनीरुपमै भएको व्यवस्था अनुसार ब्रोकर कमिशनको वापतको शुल्क र सानिमा क्यापिटलले न्युनतम शुल्कमात्रै लिन्छ । यस सेवा प्रदान गरे वापत बैंकले भने कुनै पनि शुल्क नलिने बताएको छ ।
This article was published on Onlinekhabar.com
Published on: 24th Poush 2075